medical knowledge – စာမကျြနှာ2– Healthy Life Journal
ကျန်းမာပေမယ့် အားဆေးသောက်ချင်တယ် . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားဆေးသောက်ချင်လို့ပါ။ ကျန်းမာတဲ့လူတွေအနေနဲ့ အားဆေးသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား ဆရာ။ A. အားဆေးသောက်ဖုိ့ လိုသလားလို့ မေးလာရင် တကယ်လို့ အစားအစာကို ညီမျှအောင်...
———၊ ဇွန် ၊——— လက္ခဏာတစ်ခုခုပေါ်လာရင် သူ့အလိုလို ပျောက်သွားမှာပါလို့ လူတွေက အများအားဖြင့် ယူဆထားတတ်ကြပေမယ့် အောက်ပါလက္ခဏာခြောက်ရပ် ပေါ်လာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ မဖြစ်မနေ ပြသသင့်ပါတယ်။ (၁) ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့် သွေးထွက်ခြင်း သင်က တစ်ခုခုနဲ့ ဆောင့်မိတာကြောင့် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ရင် တစ်ရက်ကျော်-နှစ်ရက်လောက်...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အရေပြားအပူလောင်တယ်ဆိုတာ ပူတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ ထိတွေ့မိတာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အလွန်နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားဟာ ရေနွေးငွေ့၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ မီးစတဲ့ ပူတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့အခါ ထိတွေ့မှုအနေအထားအလိုက် အပူလောင်တတ်ပါတယ်။ အပူလောင်မှုအဆင့် အပူလောင်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားထိခိုက်မှုအဆင့်တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရာမှာ သုံးဆင့်ရှိပါတယ်။...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— • ရာသီစက်ဝန်းဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။ • ရာသီစက်ဝန်းဆိုတာ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကနေ သွေးဆုံးချိန်အထိ တစ်လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်ရာသီသွေးဆင်းတာကို ခေါ်ပါတယ်။ သွေးဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက် ၅၀ အရွယ်ဝန်းကျင်မှာ ရာသီသွေးလာခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ •...